Global Voices teny Malagasy » Ho an’ny Governemanta ao Venezoelà, “Fampihorohoroana” ny Fanaovana Hetsipanoherana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Avrily 2017 8:57 GMT 1	 · Mpanoratra Laura Vidal Nandika (en) i Laura Vidal, Sylvia Aimée
Sokajy: Amerika Latina, Venezoela, Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Politika, Tanora, Zon'olombelona
Enina ireo mpanao fihetsiketsehana no namoy aina, ny governemantan'ny Filoha Maduro no voampanga tamin'ny fampiasàna fampijaliana amin'ireo mpanao hetsipanoherana mba hahazoana fiaikena heloka  ho “nanao asa fampihorohoroana,” ary miely patrana ao amin'ny media sosialy ireo porofon'ny fanararaotam-pahefana nataon'ny polisy. Na eo aza ny famoretana, tsy nitsahatra ireo hetsipanoherana ao Venezoelà hatramin'ny faran'ny Martsa.
“Tsy ampy velively ny vola, tsy misy ny fanafody, ary feno manao heloka bevava ny arabe, dia izaho no tsy ho avelanao hanao hetsipanoherana ambonin'izany rehetra izany?,” hoy ny olona iray nanao fihetsiketsehana , izay nampijalian'ny polisy, tao anatin'ny fijoroana vavolombelona izay omena etsy ambany ny antsipirihany.
Manohy miantso ireo mpanao hetsipanoherana ho “mpampihorohoro” ireo media tantanan'ny fanjakàna, ary amporisihan'ny Filoha Maduro ireo mpomba azy “hihetsika” eny an'arabe ihany koa. Nampitandrina i Maduro hoe ny hetsipanoherana ny 19 Aprily dia hotsenain'ny Milisy Nasionaly Venezoeliana, fantatra ofisialy amin'ny hoe Nacional Bolivarian Militia .
Taorian'ilay resabe momba ny fisaraham-pahefana  tamin'ny 30 Martsa no nanomboka ireo hetsipanoherana tao Venezoelà, fony nofoanan'ny Fitsaràna Faratampony tokoa ny Antenimieram-Pirenena, nandraisany an-tànana ny andraikitra sy namelàny ny filoha Nicolas Maduro handray ny fahefana sasantsasany an'ny mpanao lalàna. Tsy ela velona ilay fanapahankevitra — natsimbadiky ny fitsaràna  ny tantara, andro vitsy taty aoriana, saingy notohizan'ireo mpanao hetsipanoherana ny fiketsiketsehana noho ny krizy sosialy sy toerakarena ary politika lalina  nanozongozona ny firenena tato anatin'ny taona vitsivitsy farany.
Manaraka akaiky ilay raharaha fijoroana vavolombelona nataon-dry Sánchez mirahalahy avy ireo mpanao hetsipanoherana, sy ny an'ireo mpitolona avy amin'ny antoko mpanohitra Primero Justicia, izay nanaiky, noho ny fampijaliana natao azy, fa hoe ry zareo no tomponandraikitra tamin'ireo herisetra sy “hetsika fampihorohoroana ” nandrisihan'ireo antoko politika avy amin'ny fanoherana nandritra ireo hetsipanoherana.
Avy amin'ny lahatsoratra iray natao ho an'ny daholobe tao amin'ny Facebook , manazava ilay raharahan-dry Sánchez mirahalahy avy ny mpanao gazety sady mpandray anjara ato amin'ny Global Voices, Luis Carlos Díaz ( Nadika ao  amin'ny bilaogy Caracas Chronicles ny lahatsoratra manontolo):
Tamin'ny alàlan'ny vavahadin-tseraseran'ny media ProDavinci, nangonin'i Valentina Oropeza, mpanao gazety, ireo fijoroana vavolombelona  manodidina ny tranganà herisetra iray nataon'ny pôlisy tamin'ny tovolahy iray izay nofandrihan'ny polisy sy nodarohany tsy nisy antra. Farany dia nentina tany amin'ny toeram-pitsaboana izy, ary tao ireo mpitsabo no nandefa ny antso hiely tamin'ny media sosialy hifandraisana tamin'ny ray aman-dreniny. Nolavin'ireo mpitsabo sy ireo mpanampy azy ny hamela ilay marary handeha hiaraka amin'ireo mpiambina, ary izay no tena nampiavaka azy :
Nanomboka nidaroka ahy tsy nisy antra teo amin'ny tany ry zareo. Ny niaro ny lohako no hany zavatra nataoko. Nodakàn'izy ireo ny lamosiko, ny tratra, ny tànana ary ny tongotra. Novelesin-dry zareo tamin'ny kibay teny aminy daholo izay azony novelesina tamin'ny vatako. Nokapohany tamin'ny satroka aroloha hatreny amin'ny tarehiko ary tamin'ny kalazan'ny polisy mihitsy aza. Nasiany totohondry sy daka aho, ary nokapohin-dry zareo tamin'ny vodin'ny basy fandefasan-dry zareo baomba mandatsa-dranomaso. Nosintonina mafy ny voloko, ary ny iray tamin'izy ireo nanandrana nandetika ny rantsany tany anaty lava-bodiko. Polisy teo amin'ny 20 teo ry zareo, ary nisy 2 avy amin'ny 2 PNB (Bolivarian National Police ). Tsy afaka nahita intsony ireo namako aho, na iray aza.
Omaly, 13 Aprily nanodidina ny tamin'ny 7 ora hariva, ny dadatoako, 59 taona, dia nandeha fiarandalamby tao Trigal Norte any amin'ny manodidina an'i Valencia ary dia nalain'ny SEBIN an-keriny ( Bolivarian Intelligence Service ) tsy nisy fitenanana na inona na inona. Nentin-dry zareo tany amin'ny toerana miafina tany Naguanagua (faritra iray hafa any amin'ny manodidina ny tanàna), toerana izay nitreronana, nampijaliana, nidarohana sy nanasolàna ny volony, nalaina am-bavany izy no sady niharan'ny fandrahonana ho faty noho ny filazàna azy ho mifandray amin'ny “mpikomy”. Tian-dry zareo halaina am-bavany izy hahazoana vaovao momba ireo mpitarika ny hetsipanoherana ny governemantan'i Nicolás Maduro. Nosemporin'izy ireo tamin'ny ondana. Nohetezan-dry zareo ny volony, ny volomasony ary ny volombavany no sady norahonany hovonoina ho faty izy. Taorian'ireo fakàna am-bavany, navotsotr'izy ireo izy noho ny toebatany [efa ratsy]. Raha lazaina anjoanjo dia toy ny efa nalàn-dry zareo ny ainy. Tsy maintsy lazaiko fa ny dadatoako dia manana aretina amin'ny taovam-pisefoana taorian'ny fanendahana [nanjo azy]. Ny hampivarahontsana ny vahoaka no tena ataon'ilay kisoan'olona ireo mba tsy hivoahany ny trano. Tsy ho ela isika dia hahazo ny rariny. Mahatanjaha. Mitandrema, Valencia!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/04/20/98506/
 fampiasàna fampijaliana amin'ireo mpanao hetsipanoherana mba hahazoana fiaikena heloka: http://www.el-nacional.com/noticias/presos-politicos/provea-maduro-violo-ley-prevencion-tortura_177467
 olona iray nanao fihetsiketsehana: http://prodavinci.com/blogs/le-pedi-a-los-guardias-que-me-mataran-para-que-no-me-pegaran-mas-por-valentina-oropeza/
 Nacional Bolivarian Militia: https://en.wikipedia.org/wiki/Venezuelan_National_Militia
 natsimbadiky ny fitsaràna: http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=2433935&CategoryId=10717
 krizy sosialy sy toerakarena ary politika lalina: https://globalvoices.org/specialcoverage/what-is-happening-in-venezuela/
 hetsika fampihorohoroana: http://caracol.com.co/radio/2017/04/17/internacional/1492432028_348251.html
 lahatsoratra iray natao ho an'ny daholobe tao amin'ny Facebook: https://www.facebook.com/luiscarlosdiaz/posts/10154664277393722
 Nadika ao: https://www.caracaschronicles.com/2017/04/18/know-sanchez-twins/
 Bolivarian National Police: https://en.wikipedia.org/wiki/Bolivarian_National_Police
 Bolivarian Intelligence Service: https://en.wikipedia.org/wiki/Bolivarian_Intelligence_Service